🥇 ▷ Waqtiga kaftanka ku bixi Juasapp! ✅
Waqtiga kaftanka ku bixi Juasapp!
Juasapp waa mid ka mid ah codsiyada tirada yar ee loogu talagalay in taleefanka lagula kaftamo xiriiradayada; iyo inkasta oo dalabka uu yahay bilaash, waxaad leedahay xadka kaftanka, taas oo, haddii aad rabto inaad sii dheeraato, waa inaad iibsataa xirmo xirmo. Samir yar oo sii wad akhriska; maxaa yeelay qodobkaan waxaan kugu tusi doonaa sida loo helo kaftanka Juasapp aan xadidneyn gebi ahaanba bilaa lacag la’aan.
Sida loo ciyaaro kaftanka leh Juasapp aan xad lahayn?
Kahor intaadan helin kaftanka xadidan, waa inaad barataa sida loo sameeyo. Hadaadan wali garanayn sida loo sameeyo, ama aadan u xasuusan sida saxda ah, Halkan waxaa ah liis gaagaaban oo leh tillaabooyinka la qaadayo si loogu guuleysto kaftankaaga si guul ah ugana dhigo saaxiibbadaa oo dhan inay ku dhacaan:
Waxaad ka dooran kartaa mid ka mid ah kaftanka badan liiska codsiyada.
Ka xulo xiriiradaada ama garaac lambar taleefan oo aadan ku darin. Lacag-qaatahan wuxuu ka heli doonaa lambar lambar aan la garanayn kaas oo geli doona ‘seefta iyo derbiga’.
Ku raaxayso kaftankaaga
Dhageyso natiijada wada hadalka iyadoo laga hadlayo hadalka, jawaabaha iyo falcelinta dhibbanaha kaftanka ah.
Hubso inaad tahay qof ka jawaabi doona taleefanka; sababtoo ah taas oo aan la sameynin, kaftanka ayaa ku dhici doona inuu ku dilo farriintiisa codkeeda, taasoo meesha ka saareysa nimcada badan ee arrinta.
Waa kuwehee qaybaha adduunka ee aan kaga kaftami karo Juasapp?
Xilligan la joogo, Juasapp wuxuu oggol yahay oo keliya in wicitaannada laga sameeyo waddammada soo socda: Kolombiya, Spain, Faransiiska, Talyaaniga iyo Mexico.
Kaftanka aan xadidneyn ee Juasapp!
Haa, waxaan horey u soo sheegnay inaad bixiso qorshaha isdiiwaangalinta hadii aad dooneysid inaad kordhiso tirada kaftanka ee aad ku isticmaali karto arjigaan. Laakiin annagu kuu sheegi mayno inay ahayd jidka keliya… Xaqiiqdu waxay tahay in ay jirto hab aad ugu ciyaari karto kaftanka bilaashka ah asxaabtaada iyo dadka aad isla garaneyso adigoo adeegsanaya Juasapp.
In la awoodo in la sameeyo, waxaad u baahan doontaa inaad ka dhigto koontadaada Facebook barnaamijka; Markaad sidaas sameyso oo aad ku wadaago dalabka darbigaaga, waxaad heli doontaa kaftan gebi ahaanba bilaash ah.
Tabaha ayaa ah in la wadaago daabacaadda marar badan si loo helo kaftanka badan oo bilaashka ah. Laakiin haddii aad ka mid tahay dadka aan jeclayn kuwa kale inay arkaan waxa codsiyada aad la wadaagto, waad tirtiri kartaa boostada ugu dhakhsaha badan, si markaa aad u hesho kaftankaaga xorta ah dadka aad la xiriirayna ma ogaan karto inaad Juasapp derbigaaga la wadaagtay dhawaan.
La wadaag kaftankaaga Juasapp aan xad lahayn ee qof walba la wadaag
Dhamaanteen waan jecel nahay inaan maqalno jawaabta dadka kale si kaftan wanaagsan. La wadaag kaftanka aad ka sameysay Juasapp adigoo adeegsanaya Facebook, Twitter, WhatsApp, ama emayl.
Markaa waad ogtahay, haddii aad rabto inaad ku kaftamto saaxiib ama qof aad is garatid, Juasapp waa dalabka kaa caawin doona inaad u sameyso magac la’aan; si ay dhibbanayaashu ugu jees jeesaan.